Qubanaha » Madaxweyne Farmaajo oo safarkiisii ugu horeyey ku aadaya Boqor tooyada Sacuudiga.
Madaxweyne Farmaajo oo safarkiisii ugu horeyey ku aadaya Boqor tooyada Sacuudiga.
Feb 18, 2017 - jawaab
Warar lagu kalsoonaan karo oo ay heleyso warbaahinta ayaa sheegaya in Madaxweyne Farmaajo uu safarkii u horeeyay tan iyo markii xilka loo doortay ku tagi doono dalka Boqortooyada Sacuudi Carabiya, halkaasoo la sheegay inuu ku soo cumreysan doono.
Sidoo kale waxaa jira casuumaad rasmi ah oo Madaxweynaha la soo gaarsiiyay, kaasoo ay kaga timid Boqorka dalka Sacuudiga Carabiga Boqor Salmaan oo todobaadkii hore Taleefan kula soo hadlay, markii loo doortay xilka Madaxweynaha.
Boqorka Sacuudiga ayaa ahaa Madaxdii u horeysay ee carbeed ee toos hambalyo ugu soo dira Madaxweynaha la doortay, iyadoo Sacuudiga uu daneynayo xiriir wanaagsan uu la yeesho Madaxweynaha cusub.
Xafiiska Madaxweynaha ayaa la soo gaarsiiyay casuumaado uga timid dalal dhowr ah oo uu booqasho rasmi ah ku tago doono, kaddib marka la caleema saaro iyo marka uu Ra’iisul Wasaare magacaabo, sida ilo lagu kalsoonaan karo inoo xaqiijiyeen.